Kooxda uu doonayo inuu ku biiro Goolayaha Real Madrid ee Keylor Navas oo daaha laga rogay – Gool FM
(Madrid) 26 Abriil 2018. Goolhaya Real Madrid ee Keylor Navas ayaa la soo sheegayaa inuu doonayo inuu ka tago caasimadda Spain ee Madrid, waxaana la shaaciyey kooxda uu rabo inuu ku biiro.
Waxaa la warinayaa in goolhayaha kooxda Real Madrid ee Keylor Navas uu rabo inuu ku biiro naadiga ka dhisan dalka Talyaaniga ee Juventus.
Navas waxa uu u muuqdaa mid aan ahayn dooqa koowaad ee dhanka goolka kooxda Los Blancos waxaana uu rabaa inuu tago kaddib markii bishii la soo dhaafay uu hoggaanka kooxda dib ugu soo laabtay tababare Zinedine Zidane.
Zidane ayaa la rumeysan yahay inuu xiddiga xulka qaranka Costa Rica ku war geliyey inuusan qorshihiisa ku jirin, isla markaana uu Madaxweynaha kooxda ee Florentino Perez u sheegay in la iibiyo goolhayahan.
Jariiradda Don Balon ayaa warinaysa haatan in Navas uu hadda caddeeyey in halka shuruud uu ku joogi karo Madrid ay tahay in loo ballan qaadayo booskiisa joogtada ah ee safka hore xilli ciyaareedka soo socda, iyadoo laga hormarinayo goolhayaha reer Belgium ee Thibaut Courtois kaasoo taam ahaansho buuxda helay.
Keylor Navas waxa uu sheegay inuu doonayo inuu Cristiano Ronaldo kula biiro kooxda Juventus haddii uu ka tagayo Real Madrid, kooxda ku guuleysatay siddeeda jeer ee is xigta horyaalka Talyaaniga ayaana rabta inay la saxiixato Navas si ay bedel uga dhigto booska goolhaye Wojciech Szczesny.
Goolhaye kooxda Barcelona ee Jasper Cillessen ayaa la rumeysan yahay inuu yahay shabaq ilaaliye kale oo bartimaameed u ah Juventus, laakiin waa inay bixiyaan adduun lacageed lagu qiyaasayo 43 milyan oo gini si ay ula saxiixdaan isaga.